Xeer Ilaaliyaha Qaranka: Waa la diiwaangelinayaa hantida Qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xeer Ilaaliyaha Qaranka: Waa la diiwaangelinayaa hantida Qaranka
Mareeg.com: Xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya, Axmed Cali Daahire ayaa sheegay in tallaabada ugu horreysay ee ay dowladdu qaadeyso ay tahay sidii tirakoob saxan loogu sameyn lahaa Hantida Qaranka.
Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in muhiim ay tahay tirakoob saxan oo lagu sameeyo Hantida Qaranka uu leeyahay, isla markaana ay dowladdu ka soo saarto Siyaasad sharciyeesan, lana jideeyo Sharciga iyo guddiga Iibka Qaranka.
Sidoo kale dadka deggan dhulka ay dowladdu leedahay ayuu tilmaamay in ay tahay in qorshe loo sameeyo oo laga saaro si dhulku uu ugu soo laabto hay’adihii lahaa oo shaqo qaran ku qabanaya.
“Tallaabada koowaad ee in la qaado ay tahay waa in dhulka (dowladdu leedahay) tirokoob lagu sameeyo” ayuu yiri xeer ilaaliyaha oo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dhammaan dhulka dowladdu leedahay la banneeyo ayadoo siyaasad lagu wajaho ay lagama maarmaan tahay.
Xeer Ilaaliyaha ayaa sheegay in haddii dhul ay dowladdu leedahaya laga iibinayo shaca loo baahan yahay in la dhiso Guddiga Iibka Qaranka.
“Haddii ay noqoto in la iibiyo dhulka oo shacabka lagu wareejiyo waxay u baahan tahay in la howl galiyo oo ay shaqadaas qabtaan guddiga iibka qaran” ayuu sii raaciyay Dr. Axmed Cali Daahir.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanidihii dambe dib ula soo noqoneysay dhul badan oo ay ku leedahay Muqdisho iyo gobollada dalka, inkastoo weli qaar badan shacab iyo dad barakacayaal ah degan yihiin.